Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Antony Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi Antony na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya (Rosilene Xavier), nwa (Lorenzo), ndu onwe onye, ​​ibi ndu ya na uru ya.
Na nkenke, anyị na-ewetara akụkọ zuru oke nke ọsọ ọsọ - nke akpọrọ dịka otu n'ime ndị kacha egbu egbu na Football. Bodị Lifebogger nke Antony Matheus dos Santos 'Akụkọ malitere site n'oge ọ bụ nwata. Anyị na-aga n'ihu mgbe onye Brazil ghọrọ onye ama ama na Europe.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike na ọdịdị nke Antony's Biography, lee ndụ nwata ya na mbili ịrị elu. You'll ga-ekwenye na m na gallery dị n'okpuru ebe a na-achịkọta akụkọ ndụ ya.
Ihe omuma nke Antony onye ogwu. Hụ ndụ nwata ya na Akụkọ Ọganiihu.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu ọmarịcha obi ụtọ (amụrụ n'afọ 2000) nke si Brazil pụta.
See hụrụ nwoke a… ọ karịrị mgbe ọ bịara osooso, ọsọ mmiri, agility, nguzozi, dribbles na njikwa bọl. N'ezie, nke a na-egosi na ọ bụ onye ọkpụkpọ nke oge a.
N'agbanyeghị ọtụtụ otuto ndị aha ya nyere, Lifebogger ghọtara, na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara Antony's Bio. Anyị akwadebela ya, maka ịhụnanya nke Brazil na Football. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Antony nke Childhoodmụaka:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha aha Tony na aha ya bụ Antony Matheus dos Santos.
A mụrụ ndị ọkachamara na Brazil na 24th nke February 2000 na nne ya, Cremilda Prudencio na nna, Mr dos Santos, na obodo Osasco, na São Paulo State, Brazil.
Antony Matheus dos Santos bịara n'ụwa dị ka nwa ikpeazụ amụrụ, n'ime ụmụaka atọ (ya onwe ya, nwanne nwoke na nwanne nwanyị) amụrụ site na njikọ alụmdi na nwunye dị n'etiti ndị mụrụ ya. Lee, papa ya na mama ya.
Ndị a bụ nne na nna Antony. Chọpụtala na ọ dị ka mama ya? Papa Antony na-achọ nkọ.
Bọọlụ bọọlụ bọọlụ nke Brazil jiri ọtụtụ oge ọ bụ nwata soro ụmụnne ya ndị okenye na ndị nne na nna. Emerson Santos bụ aha nwanne nne Antony mgbe a na-enyocha aha nwanne ya nwanyị nke okenye n'oge ọ na-ede Biography.
N'ezie, mgbe ị na-elele foto oge mbụ nke Antony, ị ga-ekwenye na m n'okwu a; Nke ahụ ọdụdụ nwa n'ime ezinụlọ bụkarị ndị na-ama mma. Nke a bụ ihe doro anya banyere Mr mara mma. Anyị na-ahụ onye Brazil ebe a ya na ezinụlọ ya - n'oge ọ bụ nwata.
Oge Antony na-eto eto. Ha weghaara foto a mgbe ya, Cremilda (nne ya), Emerson na nwanne ya nwanyị lọtara site na ilele egwuregwu bọọlụ.
Dị ka nwa ọdụdụ nke ndị mụrụ ya, Antony na-abụkarị onye a na-akpọ ọgụ ma ọ dịghị emebi emebi. Ná mmalite, ọ dịtụghị mgbe nrụgide ezinụlọ dị ka Emerson Santos, nwanne ya nwoke nke okenye. Antony dị ngwa ngwa, na-agbatịkarị onwe ya iji nwalee ahụmịhe ọhụụ karịa ụmụnne ya.
Eziokwu bụ, enweghị nchegbu maka ya izute atụmanya dị elu nke ndị mụrụ ya na ọ bụ ya mere papa ya na mama m ji wụ elu iji mejuo naanị otu ndụ - ya bụ, Football.
Ezigbo Ezinụlọ Antony:
Nke mbụ, ezinụlọ ya abụghị ụdị ọgaranya, mana onye biri ma nwee nkasi obi dịka ụmụ amaala Brazil. Antony dos Santos sitere na nzụlite ezinụlọ dị umeala n'obi.
Ọ bụ nnukwu nna (Mr dos Santos) na-eduzi ezinụlọ ndị na-agba ọsọ. Nwoke a maara na ọ dị mkpa ime ka ndị ezinụlọ ya nwee ụdị mmetụta ịhụnanya na mkpakọrịta a.
Ikpe ikpe site na ihe ị hụrụ n'okpuru, ị kwenyere m - na ndị ịgba ọsọ sitere na ezigbo ụlọ. O nwekwara ezigbo ezinụlọ.
Ndị ezinụlọ Antony. Alọ a gọziri agọzi.
Ezinụlọ Antony bụ ndị nne na nna na-arụ ọrụ nke nwere ezigbo agụmakwụkwọ na-enweghị ego. Onye ọ bụla n’ime ha dị mma ile anya ma ha enwetala nduzi na ndụ - site na otu ụbọchị.
Nnukwu nne na nna ochie nke ndị egwuregwu bọọlụ Brazil si Portugal bịa biri na Brazil. Maka nke a, anyị nwere ike ịsị na Antony nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ ya na mba ndịda Europe.
Ọ bụrụ na ị maghị, aha ndị ịgba ọsọ (Antony Matheus dos Santos) na-eji omenala aha Portuguese. Aha nna ya ma ọ bụ nne ya bụ Matheus ebe aha ezinụlọ ya nke abụọ ma ọ bụ nna bụ dos Santos.
Maapụ a na-akọwa ezinụlọ ezinụlọ Antony.
Ebe Antony si, obodo nke Osasco, dị na Greater São Paulo wee họrọ 5th na ọnụ ọgụgụ ndị obodo São Paulo.
Dị ka nwanne ya nwoke nke okenye (Emerson), nwata (mgbe oge ruru) gara agụmakwụkwọ bụ isi. Ná mmalite, ndị nne na nna Antony hụrụ ya ụlọ akwụkwọ nke dabara na ya footballing ilk - ebe o nwere nwata na ulo akwukwo.
N'ụlọ akwụkwọ ya, Antony mepụtara IQ ịgba bọọlụ na-esote ntozu oke nke uche. N’agbata afọ ise na iteghete, onye ọ bụla lere ya anya dịka otu n’ime ụmụaka egwuregwu bọọlụ kacha mma n’obodo Sao Paulo.
Mgbe o mechara ya na ndụ, onye Brazil nwere oge ọ ga-eji leta ụlọ akwụkwọ ya. Returnlaghachi ụlọ akwụkwọ ebe ọ nọrọ n'oge ọ bụ nwata, tolitere, na-egwuri egwu ma mụta bụ n'ezie ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu.
Antony gara ileta ụlọ akwụkwọ ọ gara mgbe ọ bụ nwata.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ kelere onye nkụzi ọ bụla, onye ọrụ ya na ndị enyi ya - ọkachasị ndị so na akụkọ ịga nke ọma ya. Antony na ụmụ ya nwekwara mmekọrịta. Ọ kọwaara ha echiche nke Nrọ na ikwere.
Antony Football Akụkọ:
Ka ọ na-eru afọ iri na ụma ya, nwa okorobịa São Paulo nwere ihe ịga nke ọma n'ule hụrụ nwata ahụ ka ọ na-amalite ihe ọ kpọrọ njem ịgba bọl. Mgbe ọ dị afọ 10, Antony sonyeere agụmakwụkwọ São Paulo.
Kemgbe ụbọchị ọ debanyere aha, ndị Brazil niile mere (ehihie na abalị) na-arọ nrọ ịhụ onwe ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. A na-ese Antony n'okpuru ya na otu n'ime ndị nkụzi mbụ ya.
Otu n'ime foto izizi nke Antony - n'oge ya na Sao Paulo agụmakwụkwọ.
Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, n'oge ọ dị afọ iri na ụma, Antony malitere inwe mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ ya. Nke ahụ hụrụ na ọ bụghị nanị na Brazil na-agafe n'ọgbọ dị elu kama ọ nwetara nrite mgbe ọ na-eme nke ahụ.
Nwa bọọlụ whiz bidoro merie nrite na mbido ọrụ ya.
Otu n'ime ihe ịga nke ọma Antony na-eto eto na-enyere ndị otu ya aka Sao Paulo merie J League World Challenge. Nke a bụ asọmpi egwuregwu bọọlụ a na-eme kwa afọ na Japan gụnyere ọgbakọ abụọ sitere na J1 League na ndị otu mba na mpụga Japan.
Mgbe o nwesịrị mmeri ya, kpakpando na - arị elu - na 26 nke Septemba 2018 - ruru ọkwa dị mkpa na ọrụ.
Maka ọ ofụ nke ndị nne na nna na ndị ezinụlọ Antony, ịbịanye aka na nkwekọrịta ọkachamara mere ụbọchị ahụ gọziri agọzi. Lelee oge ndị ịgba ọsọ ụkwụ mere ka ọhụhụ nwata ka ukwuu.
Ihe omuma Antony - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Maka onye na-agba ọsọ ọsọ, ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ bụ otu ihe. Ihe ọzọ bụ ịtọlite ​​nnukwu ebumnuche ọrụ ya na-esote nke na-abụghị ihe ọzọ karịa inyere São Paulo Futebol Clube aka inweta trophies.
Site n'ime nke ahụ, onye Brazil ahụ kwenyere na ọ ga-enweta ohere ka ndị isi European European scouts gụọ ya. N'ezie, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara na-agba ọsọ na mba ahụ na-arọ nrọ nke ahụ - ya bụ, ịkwaga ọ bụla klọb ndị isi Europe.
Ọrụ siri ike na nkwụsi ike gbasoro na ekele maka nke ahụ, onye na-agba ọsọ ọsọ nwere 2019 na-agaghị echefu echefu.Ọ bụghị naanị merie aha, kamakwa ọ rọrọ nrọ nke ịbụ Nna.
N'afọ ahụ 2019, aha Antony malitere ịkụ ụda na bọọlụ Brazil. Dị ka ụgwọ ọrụ maka ihe ịga nke ọma ntorobịa ya, a kpọrọ kpakpando ahụ ka ọ sonyere otu egwuregwu bọọlụ n'okpuru-23 nke obodo ya.
Antony n'akụkụ Matheus Cunha so na kpakpando mba ndị sonyere ma merie asọmpi Maurice Revello. Nke a bụ asọmpi bọọlụ nke ọdịnala na-egosipụta U-17 na U-23 ndị otu egwuregwu ntorobịa.
Dika egosiri na vidiyo di n'okpuru, ihe mgbaru ọsọ Antony gbara maka Brazil U23 na-ekwenye na nnukwu aru gbara ya gburugburu. Ọ na-akọwa ihe kpatara ọ ga - eji nwee ọfụma na ndị otu ndị okenye.
Tricolor Paulista Successga nke Ọma Akụkọ:
Oge mgbanwe ya na São Paulo bụ nnukwu ọrụ bịara mgbe ndị otu bịanyere aka na otu onye bọọlụ kachasị ama ama na Brazil - onye nke Dani Alves.
Mgbe a nabatachara ya n'ala nna ya (Brazil), onye ama ama ama ama gwara ndị otu na ibe ya okwu ndị a;
“Akwụsịkwala ikwere na nrọ gị n’ihi na ọ ga-ekwe omume imezu ya.
Ugbu a, mgbe m gagharịchara n'ụwa niile, ọ bụ ihe ọ thrụ ịnata uwe mgbokwasị ebe a, oge eruola. ”
Dika onye isi okwu na onye isi otu, Dani Alves sooro Antony aru oru nke oma, nyere ya aka iru ihe mgbaru ọsọ ya. Mkpakọrịta ahụ abịaghị na-enweghị trophy na nke kachasị mkpa, ịbụ ndị ndị European scouts ghọtara.
Dani Alves, onye nna ya na-akpa ọchị kpaliri Antony inwe ihe ịga nke ọma.
Ihe omuma Antony - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
N'ụzọ dị mwute, afọ 2020 kara akara ịrị elu nke COVID-19. N'akụkụ tụgharịa, ọ kara akara mmalite nke isi ọhụrụ na ndụ Antony. N'afọ ahụ, ọ dabara n'ụzọ Sao Paulo - klọb nke ntorobịa ya. Lelee vidiyo n'okpuru.
Kpamkpam na 23rd ụbọchị nke February 2020, ọ theụ nke ezinụlọ Antony amaghị oke dị ka ọla ikpeazụ ha nwetara oku Europe na-atụ anya ya. Dị ka BBC si kwuo, Ajax bịanyere aka na Antony Matheus dos Santos nke Brazil U23 maka a 13m si Sao Paulo
N'ịgbaso echiche nke ọrụ football nke 2020 mgbe ọ gbasịrị COVID-19, o egbughị oge ọ bụla ịgbachitere mkpuchi gburugburu aha ya.
Na 13 Septemba 2020, Antony malitere akara maka Ajax (na mmalite ya), ihe ngosi nke mere ya onye otu dị mkpa na ndị otu ahụ.
N'oge imepụta akụkọ ndụ ya, obodo Sao Paulo na nwanne ya nwoke site na nne ọzọ, David Neres enyerela AFC Ajax aka ka o merie KNVB Cup.
Nke a bụ nnukwu asọmpi na Netherlands nke Royal Dutch Football Association haziri.
Ikpe ikpe site na ike dị iche iche nke Antony (ịgafe, ijide bọl ahụ, imecha, dribbling na iwe ogologo oge), o doro anya na onye Brazil ga-aga ebe.
N'ezie, ọ bụ naanị oge tupu ụfọdụ klọb ndị kachasị elu na Europe agbaa ya mbọ. Ihe ndị ọzọ nke Antony's Biography, dị ka Lifebogger na-ekwu mgbe niile, abụghị akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Rosilene Silva?
Ọ bụ nwunye Antony - nwanyị mara mma nke nwere ezi ihe kpatara ịchụso ebumnuche ndụ ya. Rosilene Silva na-etu onwe ya dị ka onye ahụ, ngwugwu zuru oke nke nyela nkasi obi dị mkpa nke mere Antony ka ọ biri nke ọma na Europe.
Nke a bụ Rosilene Silva. Nwanyị na Ndụ Antony.
Inwe ike ịchọta onye ụdị gị, onye ị ga-pịa n'ụzọ doro anya bụ mmetụta kachasị ukwuu. Nke a bụ ihe gbasara Antony Matheus dos Santos na nwunye ya, Rosilene Silva.
Ndị ọgba bọọlụ ezuteghị onye hụrụ ya n'anya na Netherlands. Kama nke ahụ, Antony na Rosilene anọkọla ọnụ kemgbe ọ bụ nwata na Brazil.
Rosilene Silva na Antony dos Santos yiri ezigbo dakọtara. Enyerela onye ọ bụla ọzọ site n'otu ụbọchị.
Enweghị ihe akaebe na-egosi na Antony na Rosilene lụrụ. Otu ihe doro anya. Ezinụlọ ha anabatala ịdị n'otu ha. Di na nwunye ahụ n'isi ụtụtụ kpebiri ịmụ nwa.
Kpamkpam na ụbọchị 8 nke Nọvemba 2019, Antony na Rosilene nabatara mkpụrụ mbụ ha - nwa nwoke ha kpọrọ Lorenzo. Inwe nwatakiri bu ihe kachasi itunanya nye ndi nne na nna ohuru. Ọ bụ nnukwu ọ joyụ nye Antony na Rosilene ijide Lorenzo na nke mbụ ya.
Antony na Rosilene nabatara Lorenzo na 2019. Lee mmetụta ọ bụ! Ijide na ịhụ nwa gị oge mbụ.
Maka Antony, oge ịdị mma dị mkpa maka mmekọrịta nna na nwa. Winger bụ ụdị onye na-etinye ezigbo oge na Lorenzo na ndepụta ndepụta ihe ọ ga - eme.
Ndị nna na-eme nke ọma ma nwee omume enyi nwere ike ime ka ụmụ ha soro ha. Maka nke a, Lifebogger chere na nwa Antony (Lorenzo) nwere ike bụrụ bọọlụ - dịka papa ya. Were ya na ya na papa ya na-egwuri egwu mgbe ọ dị afọ 39.
Dị ka ndị na-agba ọsọ ụkwụ, ịmụ nwa nwoke mgbe ị bụ 19 dị ịtụnanya. N'ezie nwa nwoke Antony nwere ike bụrụ ndị ịgba egwu bọọlụ.
Antony maara ihe karịa ndị ọgbọ ọ bụla nke ọgbọ ya. Ọ bụ onye nwere ikike isetịpụ ebumnuche ziri ezi maka ọrụ onwe ya na nke ọrụ ya. Antony nwere oke okpukperechi na nkwenye ime mmụọ ya etinyela aka na umeala n'obi ya.
Dị ka a na-ekwukarị, ihe nzuzo banyere ọdịnihu na-ezo ezo na ọrụ ha kwa ụbọchị. Omume mgbatị Antony na-ekpughere anyị ihe nzuzo nke ngwa ọgụ kasịnụ - nke bụ ọsọ. Lee ya n'okpuru.
Thezọ onye Brazil si ebi ndụ ya ma na-emefu ego ya dabere na otu ihe - ezinụlọ ya mara mma. Antony, nwunye ya (Rosilene) na nwa ya nwoke (Lorenzo) bụ nnukwu ndị na-efe ezumike ezumike. Nke a bụ ihe akaebe na ha atọ na-ekpori ndụ n'oké anwụ.
Ndụ Antony - kọwara ya!
Antony, nwunye ya, Rosilene ezumike mmiri mara mma enweghị ike mezue ma ọ bụrụ na ịnweghị ịnya ụgbọ elu. A na-ese ma ndị hụrụ ya n'anya na mmiri Indaiá Beach (nke dị na Sao Paulo) na-enwe ọ theirụ ikike Chineke nyere ha.
Ihe ọ bụla anyị maara banyere onye Brazil gbadoro ụkwụ na ezinụlọ ma na-echebara obere omume nke igosi ụdị ndụ na-adịghị mma echiche. Onweghi ihe dika igosi ndi Fans nnukwu ulo ya (ulo) ya na ihe ndi ozo Neymar eme.
Anyi matara na Antony nwere ihe dika Mercedes-Benz C-Klas - n’etiti ugbo ala ya. Anyị chọtara nke a mgbe anyị hụrụ Rosilene na Lorenzo ka ha na-alọta na Johan Cruijff ArenA.
Gbọala Antony - dọwara n'akụkụ nwunye ya (Rosilene) na nwa ya nwoke (Lorenzo).
Ndụ Ezinụlọ Antony:
Mgbe ị na-eche maka ezigbo ụlọ ndị Brazil nwere nne na nna dị umeala n'obi bụ ndị ji ihe dị ukwuu chụọ àjà iji mepụta ndị egwuregwu bọọlụ, leezie anya karịa nke dos Santos. Na oke oke, nke a bụ onye na ihe ezinụlọ bụ / pụtara maka onye Brazil.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara Nna Antony, Mama na ụmụnne ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Banyere Nna Antony:
Mgbe ị kpọrọ papa gị “Guy”, ọ na-egosi ọbụbụenyi a na-apụghị imeri emeri. Mr dos Santos bụ enyo nwa ya nwoke - nwoke bụ onye nyere aka na ọrụ Antony ghọrọ eziokwu.
Otu ihe dị oke mkpa ị nwere ike ịmaghị gbasara Nna Antony bụ eziokwu ahụ na ọ bụbu onye na-ese anwụrụ anwụrụ. N'oge nwa ya tinyere foto a site na Instagram ya, o mere ka ndị Fans mara na nna ya na-ese anwụrụ maka afọ 38 ma nwee obi ike iji kwụsị ị addictionụ ọgwụ ọjọọ a - na 2014.
Antony na papa ya na-eme emume National Day megide ụtaba.
O doro anya na Mr dos Santos Cigarette ịkwụsị akụkọ bụ ihe mmụta nye ndị nna riri ahụ na ndị na-eto eto ka ọ na-esiri ike ịkwụsị ị theụ sịga. Dị ka nwa ya nwoke na-agba ọsọ;
I nwekwara ike ime! Ime mkpebi iji kwụsị ị smokingụ sịga bụ nke gị ma ọ nwere ike ịmalite ugbu a!
Banyere nne Antony:
Cremilda Prudencio bụ nwanyị nwanyị mụrụ nwa onye Brazil. Ọ na-anọkarị na bekee Antony na-akpọ mgbe ọ bụla ọ chọrọ ya maka ndụmọdụ.
Cremilda Prudencio bụ ezigbo ihe atụ nke ezigbo nne.
Banyere Nwanne Antony:
Ihe mbụ ị ga-ahụ banyere Emerson Santos bụ eziokwu na ọ were mgbe ọdịdị ihu mama ya dị. Nwoke mara mma ma dị ezigbo ndụ Dude nwa nwoke na nwa nke ezinụlọ.
Nke a bụ Emerson Santos. Nwanne nwoke nke okenye nke Antony. Ọ bụ nwoke dị ndụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị ịgba ọsọ ụkwụ, Emerson Santos bụụrụ nwanne ya nwoke nke obere ihe nlereanya. Ya na papa ya, ya na Junior Pedroso (onye na-agba bọl) na-ejikwa ọrụ Antony.
Ọ dị mma ịhụ ka ụmụ nwoke nwoke nke Santos (Emerson, Antony na Lorenzo) na-anọkọ ọnụ. Igosipụta ọdịbendị nke ijikọ ezinụlọ ọnụ bụ otu n’ime obere ihe nzuzo nke ọganiihu ha.
Sonsmụ nwoke na nwa nwa nke dos Santos Family - na-ekpori ndụ.
Banyere Nwanne nwanyị Antony:
N'ụzọ doro anya, ọ bụ naanị nwa nwanyị nke ezinụlọ. Anyị matara ya nke ọma na 30th nke Jenụwarị 2019 - mgbe Antony tinyere foto ezinụlọ ya na nkọwapụta;
N'ikpe ikpe site na mama mama ya, ọ bụghị ihe ijuanya na Antony ga-abụ nwanne nwanyị mara mma.
Isi m, ndi mmeri m !! M na-ekele ndị ezinụlọ m mgbe niile na-anọ m n'akụkụ… Abụ m na m bụ maka ha !!!
O yiri ka nwanne nwanyị Antony, n'adịghị ka Emerson, emeela mgbalị siri ike ịghara ime ka ọha mmadụ mara ya. Ndi otu anyi ka na acho ikpughe aha ya ma anyi gha ekpughe ya ozugbo anyi matara.
N'ịchịkọta Biography nke onye Brazil, anyị ga-eji ngalaba mmechi kpughee eziokwu ndị ọzọ banyere ya. N’atufughi oge, ka m bido.
Eziokwu # 1 - The 360 ​​Degree Dribble:
Ọtụtụ ndị na-agba bọọlụ Brazil na-anya onwe ha na dribbles, nkà dị ịtụnanya na aghụghọ bọl. Dị ka Akụkọ Mgbe Ochie Ronaldinho, Antony nwere aka mbinye aka nke aka ya - nke anyị kpọrọ 360 Degree Dribble. Lelee ya n'okpuru;
Eziokwu # 2 - aringtụle Antony's Ajax Salary na Nkezi Onye Amaala Brazil:
Kwa Afọ: € 885,360
Ọnwa kwa: € 73,780
Kwa Izu: € 17,000
Kwa :bọchị: € 2,428
Kwa elekere: € 101
Nkeji nkeji: € 1.6
Sekọnd: € 0.03
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Bio nke Antony, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ebe o si bia, onye Brazil ọ bụla na-akwụ ụgwọ euro 373.25 kwa ọnwa ga-achọ afọ 46 iji mee Antony ụgwọ ọnwa kwa izu na Ajax.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Antony:
Dika anyi mara, onye Sao Paulo bu otu onye n’atu egwu ndi Kristian nke ọgbọ ya. N'oge ahụ na ọbụna ụbọchị, Antony enweghị nsogbu n'igosipụta okwukwe ya n'ihu ọha. Ndị mụrụ ya nwere ya dị ka ndị Katọlik na ọ sonyeere gburugburu 123 nde ndị Brazil na okpukpe okpukpe.
Eziokwu # 4 - Nnukwu Ike FIFA:
Ihe ngosi FIFA nke Antony bu ihe itunanya. Dika edere ya n’okpuru, o nweghi oso ososo kama otutu ogha n’usoro.
Nke na-adọrọ mmasị, Antony so na kpakpando ole na ole nke ọgbọ ya nwere ọkwa kachasị elu. Ka a sịkwa ihe mere o ji soro FIFA kacha mma 21.
Ma ị bụrụ onye novice ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọnọdụ ọrụ, ọ nwere ike ịtọ gị ụtọ ịmara ole Antony ga-eto na afọ ndị na-abịa. Maka nke a, anyị kpebiri iweta nsonaazụ nke ule uto ya.
Na-achọ ụzọ dị mfe iji nweta ozi gbasara profaịlụ Antony, jiri nwayọ jiri tebụl Wiki n'okpuru. Ọ chịkọtara ihe ncheta nke onye Brazil.
Aha zuru ezu: Antony Matheus dos Santos
Data nke ọmụmụ: Thbọchị 24 nke February 2000
Ebe amụrụ onye: Osasco, Brazil
Age 21 afọ na ọnwa 5.
Ndị nne na nna: Oriakụ Cremilda Prudencio (nne), Mr dos Santos (Nna)
Ụmụnne: Emerson dos Santos (nwanne nwoke Antony) na nwanne nwanyị aha ya maara.
Nwunye: Rosilene Silva
Nwa: Lorenzo dos Santos
Ezinụlọ Ezinụlọ: obodo nke Osasco, Sao Paulo, Brazil.
elu: 174 mita ma ọ bụ (5feet 9inches)
Onye nnọchite anya: Nlekọta Ọrụ Nlekọta 4Comm
Net Net (2021): 1.5 nde Euro
Biography nke Antony na-echetara ndị na-agba ọsọ egwuregwu bọọlụ maka ịdị mkpa nke ịdị umeala n'obi ma nwee mkpebi iji nweta ebumnuche ndụ anyị.
Starlet nke Brazil nwere nzụlite ya site na ezinụlọ dị umeala n'obi. N'ezie, ọ dị anyị mkpa ịja ndị mụrụ ya mma - Cremilda Prudencio (nne) na Mr dos Santos (nna) maka ọrụ nke ọma. Nnukwu nwanne na nwanne (Emerson) keere òkè na nzụlite nwa ezinụlọ ikpeazụ.
N'ihi ndụ a haziri nke ọma, Antony bụ otu n'ime ndị na-agba ụkwụ ole na ole (dị ka Phil Foden) onye nwetara nwa nwoke (Lorenzo) na 20 afọ ma ọ bụ n'okpuru. Cheedị echiche ịghọ ndị ịgba ọsọ na 18 mgbe papa ya bụ 38. Nke a site na itinye aka pụtara na Lorenzo nwere ike iso nna ya nwee ike n'ọdịnihu.
Nwunye Antony, Rosilene Silva bụ nwanyị pụrụ iche nke nwere ntinye aka ọzọ iji hụ na di ya na-enweta nkwado mmụọ ọ bụla achọrọ ka ọ nwee ihe ịga nke ọma n'ọrụ ya. Di na nwunye ahụ bụ otu n'ime ezinụlọ na-eto eto na-eto eto na Brazil.
Daalụ maka inwe ndidi n'ebe anyị nọ n'ọchịchọ anyị na-achọ kwa ụbọchị ịnye Akụkọ nwata na Biography nke ndị bọọlụ Brazil. Lifebogger na-ekwusi ike izi ezi na izi ezi nke ọdịnaya ya. Biko bịakwute anyị site na kọntaktị mgbe ị hụrụ mmejọ ọ bụla na ederede anyị.
Ikpeazụ ma ọbụkarịa, jiri nwayọ mee ka anyị mata maka otu ị siri hụ edemede a na Antony's Bio. Kedu ihe ị chere gbasara ndị ịgba ọsọ bọọlụ na onye dere akụkọ ndụ ya?